Job 40 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
40 Jehova wee zaa Job, sị: 2 “Onye na-ahụtakarị mmejọ ọ̀ ga-esesa Onye Pụrụ Ime Ihe Niile okwu?+Ka onye na-abara Chineke mba zaa ya.”+ 3 Job wee zaa Jehova, sị: 4 “Lee! O nwekwaghị ihe m bụ.+Gịnịkwanụ ka m ga-aza gị?Ekpuchiwo m ọnụ m aka.+ 5 Otu ugboro ka m kwuru okwu, agaghịkwa m aza gị;Ugboro abụọ kwa, ọ dịghịkwa ihe ọzọ m ga-ekwu.” 6 Jehova wee si n’oké ifufe+ zaa Job, sị: 7 “Biko, kee ájị̀ n’ume dị ka dimkpa;+M ga-ajụ gị ajụjụ, gị onwe gị azaakwa m.+ 8 N’ezie, ị̀ ga-eme ka ikpe m gharazie izi ezi?Ị̀ ga-akpọ m onye ajọ omume ka o wee bụrụ na ikpe ziiri gị?+ 9 Ka ì nwere ogwe aka yiri nke ezi Chineke,+Ị̀ pụkwara iji ụda olu yiri nke ya mee ka égbè eluigwe gbaa?+ 10 Biko, were ịdị ebube+ na ịdị elu+ chọọ onwe gị mma;Yirikwa ùgwù+ na ịma mma+ dị ka uwe. 11 Gosipụta oké iwe gị,+Lee onye ọ bụla nke dị mpako, weda ya ala. 12 Lee onye ọ bụla nke dị mpako, wetuo ya ala,+Zọdakwa ndị ajọ omume kpọmkwem n’ebe ha nọ. 13 Zoo ha dum n’ájá,+Kechie ihu ha n’ebe zoro ezo, 14 Mụ onwe m ga-aja gị mma,N’ihi na aka nri gị pụrụ ịzọpụta gị. 15 Lee Enyí Mmiri nke m kere dịkwa ka m kere gị.Ọ bụ ahịhịa ndụ ka ọ na-ata+ dị ka ehi. 16 Lee, ike ya dị ya n’úkwù,Ike ya nke dị ukwuu+ dị ya n’akwara afọ. 17 Ọ na-arọgọ ọdụ ya dị ka osisi sida;A kpara akwara apata ụkwụ ya akpa. 18 Ọkpụkpụ ya bụ okporo ọla kọpa;Ọkpụkpụ ya nke siri ike yiri mkpirisi ígwè. 19 Ọ bụ mmalite nke ụzọ Chineke;Onye mere+ ya pụrụ iweta mma agha ya nso. 20 N’ihi na ugwu dị iche iche na-emepụtara ya ihe oriri,+Anụ ọhịa niile na-egwurikwa egwu n’ebe ahụ. 21 N’okpuru osisi lotọs dị ogwu ogwu ka ọ na-edina,N’ebe zoro ezo nke ahịhịa amị dị+ nakwa n’ebe mmiri na-adọ.+ 22 Osisi lotọs dị ogwu ogwu na-eji ndò ya kpuchie ya;Osisi pọpla nke ndagwurugwu iyi na-agba ya gburugburu. 23 Ọ bụrụ na e nwee ebili mmiri n’osimiri, ọ dịghị agba ọsọ n’ụjọ.Ọ bụrụgodị na osimiri Jọdan eju n’ọnụ wee na-asọpụta, obi na-esi ya ike. 24 Ọ̀ dị onye pụrụ ịnọ n’ihu ya nwụde ya?Ọ̀ dị onye pụrụ iji nko dụpuo ya imi?